Ishedyuli yokucima ukucima ixesha kwi-Android | Iindaba zeGajethi
Ungayicwangcisa njani inkqubo yokuvalwa kweBhokisi yeTV ye-Android kunye neSimer Shaft
Ukucima ixesha sisisixhobo esinomdla siyiqwalasele kwisiganeko esidlulileyo kwaye yasinceda ekupheliseni iinkqubo okanye iyalela ikhompyuter ukuba icime ngokuzenzekelayo Ngexesha elichaziweyo. Ngelishwa, esi sixhobo besingazinikelwanga kwizixhobo eziselfowuni ze-Android, nangona ngoku sifumene igama elinomdla onokuthi ulisebenzisele loo njongo.
Ngamanye amagama, ukuba unesixhobo esiphathwayo esine-Android operating system, unga Sebenzisa iShutdown Timer ukuyicima ukuba icime Ngexesha olifunayo, nangona, kukho ezinye iindlela zokhetho onokuzisebenzisa ngokuxhomekeke kwimfuno yakho.
Ungalucwangcisa njani ixesha lokuVala kwi-Android TV-Bhokisi yethu
Ngaphambili kufuneka sicacise ukuba iifowuni eziphathwayo kunye neemodeli ezithile zamacwecwe anenkqubo yokusebenza ye-Android ukusuka ku-4.0 ukubheka phambili umsebenzi onomdla ngaphakathi koqwalaselo lwayo evumela abasebenzisi bayo ukuba bacime isixhobo ngexesha elithile, ukuze ingaqhubeki nokutya ibhetri yayo. Ngelishwa, lo msebenzi awufumaneki ngaphakathi koqwalaselo kwi Ibhokisi yeTV ye-Android, Ke ngoku kufuneka sisebenzise iSimersdown Timer, isicelo se-Android onokuzikhuphelela ngqo kwiVenkile yeGoogle Play.
Emva kokuba ukhuphele kwaye usebenze ukucima ixesha, iapp ye-Android okokuqala iya kucela imvume yomntu ogqithisileyo, kufuneka ubanike ukuze isebenze namalungelo omphathi; ukuphatha kulula kakhulu kwaye kulula, kuba kufuneka Chaza elona xesha ufuna ukuba licime ngokuzenzekelayo Iqela lakho, umhla kufuneka ubandakanywe kolu lwazi. Ezantsi kwefestile kukho iindlela zokucima, ukuthumela ukuqala kwakhona, ukulala phakathi kwezinye iindlela onokukhetha kuzo ngokwemfuno yakho. Mhlawumbi kufanelekile ukuphawula ukuba ukuba sifuna izixhobo zokucima yonke imihla ngexesha elithile kuya kufuneka siyicwangcise yonke imihla, kuba akukho msebenzi apho sivunyelwe ukuba sikhethe "yonke imihla" yeveki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ungayicwangcisa njani inkqubo yokuvalwa kweBhokisi yeTV ye-Android kunye neSimer Shaft
Molo: Ndine-tv yethebhulethi, okanye ibhokisi yetv, ndifumene amaqhosha ewijethi ukucima isikrini kunye ne-wifi kunye nabanye, ingxaki kukuba ndisebenzisa imouse engenazingcingo kwaye ezo zicelo zicima isikrini kuphela imouse iyahamba, voila, ibhokisi yetv iyasebenza kwakhona ...
Umbuzo wam ngowokuba kukho into yokushiya ibhokisi yetv ime ecaleni, ngendlela eya kuthi iphinde isebenze xa ndicofa imouse kwisitshixo kwaye ndingasihambisi nje, kungenjalo kuya kufuneka ndisicime isixhobo, ndenzele ntoni Ndidinga ukuba ndikhethe ukuyicima ndicime iqhosha endaweni yeenkqubo zexesha.
Yinto endiyijongileyo, ndiyishiye ndilindile kodwa andikwazi, mhlawumbi ngenxa yokuba i-firmware ndicinga ukuba icwangcisiwe irhoxisa ipateni okanye imisebenzi yokutshixa isikrini, ngenxa yamva nje ngesizathu esicacileyo kuba izakuba Umyalelo wokuba akunakwenzeka ukuba ubeke umzekelo, okanye imouse ibingasayi kusebenza, njl.
Ngapha koko, andazi, ndibuza nje ukuba ikho into efanayo.
Uyifaka njani iR Recycle Bin kwi Windows 10 Taskbar
Ubuqhetseba bokufaka ividiyo ye-YouTube ngokudlala ngokuzenzekelayo